Chiang Mai University Myanmar Students | မင်္ဂလာပါ။ ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ရောက် မြန်မာကျောင်းသား/ကျောင်းသူများမှ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။
Chiang Mai University Myanmar Students
မင်္ဂလာပါ။ ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ရောက် မြန်မာကျောင်းသား/ကျောင်းသူများမှ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။
CMU Site Links
Posted by: cmummstudents | December 6, 2009
Special Talk on Management
The International Business MBA Program, Faculty of Business Administration,
Payap University is proud to present
PAUL A. TIFFANY, Ph. D. (Professor of Management)
The Changing Global Economy of the 21st Century:
Senior Lecturer, The Haas School of Business University of California, Berkeley (since 1994)
Visiting Professor, SASIN Graduate School of Management, Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand)
Visiting Professor, NIDA-International MBA Program Bangkok (Thailand)
Visiting Professor, IOMBA (International Organizational MBA Program), University of Geneva, Switzerland
Visiting Professor, AVT Business School. Copenhagen
“Does History Matter in Business?” Enterprise and Society: The International Journal of Business History (December 2009, forthcoming)
Business Plans for Dummies (San Francisco: IDG Books, 1997), co-author Steven Peterson, Ph.D. (fifteen printings, available in ten languages); Second Edition published January 2005.
The Decline of American Steel, How Management, Labor and Government Went Wrong (New York; Oxford University Press, 1988); published in Japanese in Tokyo (1989) as Kyodai sangyo to tatakau shidisha, america tekkogyo no kubo
“The U.S. Crisis in Steel—Origins, Problems, and Proposals, “The Wharton Annual9(1985), pp.19-24.
Some Consulting: Recent clients include: Cisco system; US Steel; Siam Cement Group (Thailand); Microsoft; Morgan Stanley; Bank of America; AXA (France); Deutsche Post World Net (Germany); MinSheng Bank (China); Hartford Insurance Co; Statoil (Norway); Mohegan Sun Casino and Resort; National Football League Players Association; Fidelity Investments; Securities Industry Institute; Korean Management Association (Korea); Textron; Raytheon; Intel; KPMG; Cooper Health System; BEA Systems; Kimberly-Clark (Thailand); Johnson & Johnson; Toyota; General Motors; Genentech; Progressive Insurance.
Significant Awards: Recipient, Cheit Outstanding Teacher Award, University of California, Berkeley, Hass School – 2003 and 2004.
Recipient, University of Pennsylvania Lindback Award (outstanding professor, university – wide, 1990).
Recipient, Wharton School Excellence I Teaching Award (1986).
Recipient, Wharton Anvil Award (outstanding professor, 1985).
Topic: The Changing Global Economy of the 21st Century: Where are we going?
Date: Dec 12, 2009 at 5.30-7.30 pm.
Session I: talk by the speaker
Session II: Q&A session
Venue: Library Auditorium (Weera Kitjathorn Room)
Posted by: cmummstudents | November 30, 2009
Invitation: RCSD Graduate Seminar by Soe Lin Aung
Dear RCSD fellows,
RCSD is please to invite you to join our Graduate Seminar, Year 2/2209 from RCSD, conducted by Soe Lin Aung, RCSD Affilated Researcher and US Fulbright Scholar.
NOTES ON A DOWNTURN: Economies of Crisis and Difference Among Migrant Communities on the Thai – Burma Border, 2008 – 2009.
Soe Lin Aung, RCSD Affiliated Researcher, US Fulbright Scholar, and Research Officer at Migrant Assistance Program (MAP) Foundation
Dr. Kwanchewan Buadaeng, Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
Wednesday 9th December 2009 at 13:30 – 15:30 hrs.
RCSD Study Room (02-001), 2nd Floor of Operational Building, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
Your confirmation of attendance sent to rcsd@chiangmai.ac.th is highly appreciated.
and Sustainable Development (RCSD)
Tel: +66-0-5394-3595 to 6
Posted by: cmummstudents | November 3, 2009
HBF M.A Scholarship for Myanmar
Posted by: cmummstudents | October 3, 2009
စုပေါင်း ၀ါကျွတ်အလှူပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြို့၊၀ပ်ဆိုင်းမွန်းမြန်မာကျောင်းတိုက်၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်မြဲဖြစ်သော စုပေါင်းဝါကျွတ်အလှူပွဲ ကြီးကို ယခု (၂၀၀၉)ခုနှစ်တွင် လည်း အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်နိုင်ကြပါရန် လေးမြတ်သောစိတ်ထားဖြင့် ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်။
နေ့ရက်: သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်၊တနင်္ဂနွေနေ့။ (၀၄-၁၀-၂၀၀၉)
အချိန်: -နံနက်(၇း၀၀)နာရီမှ စတင်၍ ကြာဆံဟင်းခါးစသော မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာများဖြင့် ဧည့်ခံပါမည်။
-နံနက်(၁၀း၀၀)နာရီတွင် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အား န၀ကမ္မစသော လှူဖွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ လှူဒါန်းဆက်ကပ်ပြီး ရေစက်ချ အနုမောဒနာ တရား နာကြားကြပါမည်။
ကြာဆံဟင်းခါးအလှူရှင် = Night Bizarre ဈေးသူ/ဈေးသားများ၊ ကျောင်းဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့နှင့် ရပ်နီး/ရပ်ဝေးမှ အလှူရှင်များ။
အရုဏ်ဆွမ်းနှင့် ခဲဖွယ်အလှူရှင် = ဒေါ်နန်းတင်လှ- မိသားစု၊ လွိုင်လင်မြို့။
နေ့ဆွမ်းအလှူရှင် = Mr. Alan J. A + မလှလှသီ၊ လွိုင်ကော်မြို့။
ဖျော်ရည်အအေးအလှူရှင် = မသိန်းသိန်းလွင်- မိသားစု၊ ဘော်လခဲ၊ လွိုင်ကော်မြို့။
ရေခဲမုန့်အလှူရှင် = ကိုကျော်စွာ(ဂိုးသမား) + မခင်နှင်းဝေ- မိသားစု။ လင်းခေးမြို့။
နေရာ: ၀ပ်ဆိုင်းမွန်းမြန်မာကျောင်းတိုက်၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ။
Posted by: cmummstudents | September 4, 2009
About the Meeting for the International Day 2009
This year in November, we have to participate in the International Day, which is arranged by the Graduate School, CMU. In that ceremony, each country has to exhibit her own cultures and tradition, including performances, foods, local products, etc. And It is said the Graduate School will hold the meeting on this matter. Therefore, before the Graduate School Meeting, we, Burmese Students, should discuss what should we present, perform and exhibit on that day.
The meeting among Burmese Students is planned to make on this coming Saturday evening at the Nimmanhaemin Burmese Restaurant. We will have dinner, discussion and informal meeting there.
Location: Burmese Restaurant, Nimmanhaemin Road
Time: 05- 09 – 2009, Saturday, 6:00 pm
Therefore, all of you are cordially invited to join the meeting.
Posted by: cmummstudents | July 11, 2009
Pyap Lecture Series (India’s Look East Policy)
Please convey the special guest speaker program below to all Burmese students at CMU and other students also wh are interested.
The Thai and Southeast Asian Studies Program at Payap University is proud to announce the following guest lecture as part of “PAYAP PRESENTS,”aregular lecture series (in English) featuring scholars working on Southeast Asia.
Thursday, 16 July 2009: “India’s Look East Policy and its Implications for Southeast Asia”
Speaker: Dr. Siegfried Wolf, South Asia Institute, Heidelberg University, Germany
Room 213, Pentecost Building (formerly the Graduate and International Studies Building)
Mae Khao Campus (behind Carrefour)
Foramap to Payap University, please log onto: http://ic.payap.ac.th/university/map.php
Posted by: cmummstudents | July 5, 2009
စုပေါင်း ၀ါဆိုသင်္ကန်း လှူဒါန်းပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ ၀ပ်ဆိုင်းမွန်းကျောင်းတိုက်၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်မြဲဖြစ်သော စုပေါင်း ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကြီးကို ယခု (၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင်လည်း အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်နိုင်ကြပါရန် လေးမြတ်သောစိတ်ထားဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
၁၃၇၁ ခုနှစ်၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့။ (၀၇ – ၀၇ -၂၀၀၉)
နံနက် (၇း၀၀) နာရီမှ စတင်၍ မုန့်ဟင်းခါးစသော မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများဖြင့် ဧည့်ခံပါမည်။
နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီတွင် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အား ၀ါဆိုသင်္ကန်းစသော လှူဖွယ်ဝတ္ထု အစုစုတို့ လှူဒါန်းဆက်ကပ်ပြီး ရေစက်ချ အနုမောဒနာတရား နာကြားကြပါမည်။
မုန့်ဟင်းခါး အလှူရှင် – Night Bizarre ဈေးသူ/ ဈေးသားများနှင့် ရပ်နီး၊ ရပ်ဝေးမှ အလှူရှင်များ။
လ္ဘက်ရည်နှင့် ပလာတာ အလှူရှင် – ပီနန်းရင် မိသားစု (လင်းခေးမြို့)
ဖျော်ရည် အအေးအလှူရှင် – မသိန်းသိန်းလွင် မိသားစု (ဘော်လခဲ၊ လွိုင်ကော်မြို့)
ရေခဲမုန့် အလှူရှင် – ကိုကျော်စွာ (ဂိုးသမား) မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများ
၀ပ်ဆိုင်းမွန်း မြန်မာကျောင်းတိုက်၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
ကိုငယ်၊ ကိုရာဂျန်း၊ ကိုဂျက်၊ ကိုအောင်ဖြိုး၊ ကိုကျော်မျိုးလွင်၊ မလှလှသီ (မမီးမီး)၊ ကိုကျော်မိုး + မဆွေ၊ ကိုကျော်စွာ (ဂိုးသမား)
သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ပါ စုပေါင်း ၀ါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်းပွဲ အတွက် လာရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါရန် လေးစားစွာ တိုက်တွန်း နှိုးဆော် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ လှူဒါန်းပါဝင်လိုလျှင်လည်း တတ်အားသရွေ့ လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော် အပ်ပါသည်။
Posted by: cmummstudents | June 4, 2009
HOSO Chiang Mai Arts Festival!!
Chaing Mai Art Musuem
Please join various activities from local groups and organization.
The activities are zoned into differents part which are:
Traditional Arts: local curriculums demonstration for kids, performances by Lanna School, traditional market, local food etc.
Literatures: Hand made books demonstration and contest, creative reading activities for kids, books fair, meet up with writers etc.
Arts Market: Enjoy various kinds of arts such as painting, drawing, pottery, weaving, carving etc.
Sharing Market: Share your collections, art works, used stuff. You can just share or sell inafair price. To campaign for reduce buying new products and properly use.
Drama, puppets and out door movies: Demonstrations, showing movies etc.
Music and Performances: Meet up with diversity of music from traditional to modern!
HOSO Seminar on Arts for Creativity and Happiness in Chiang Mai: Big trees exposure trip in town, painting activities with schools
Artist Zone: For kids and youth to enjoy creating arts!
For more information please vist http://hoso2009.hi5.com
Posted by: cmummstudents | May 4, 2009
မြန်မာ့ရိုးရာ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၊ ၀ပ်ဆိုင်းမွန်း မြန်မာကျောင်းတိုက်၌ မြန်မာ့ရိုးရာ ကဆုန် ညောင်ရေသွန်း ပွဲတော်ကြီးကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက်နိုင်ကြပါရန် လေးမြတ်သော စိတ်ထားဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက်……….. ၀၈-၀၅-၂၀၀၉ (သောကြာနေ့)
အချိန်…………. နံနက် (၇း၀၀) နာရီမှ ညနေ (၅း၀၀) နာရီထိ
အချိန်…………. ညနေ (၅း၀၀) နာရီမှ စတင်၍ ဓမ္မစကြာတရား ဒေသနာတော်ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြမည်
သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ပါ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲအတွက် လာရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါရန် လေးစားစွာ တိုက်တွန်း နှိုးဆော် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ လှူဒါန်းပါဝင်လိုလျှင်လည်း တတ်အားသရွေ့ လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော် အပ်ပါသည်။
Posted by: cmummstudents | April 13, 2009
အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ ၀ပ်ဆိုင်းမွန်း မြန်မာကျောင်းတိုက်၌ ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ရောက် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စုပေါင်း၍ မြန်မာ့ရိုးရာအစဉ်အလာမပျက် အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်နိုင်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် …… ၁၇-၀၄-၂၀၀၉ (သောကြာနေ့)
အချိန် ……. ညနေ (၅း၀၀) နာရီ
သံဃာတော်အရှင်မြတ်များမှ အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း
အချိန် ……. ညနေ (၅း၃၀) နာရီ
ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ရောက် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ အန္တရာယ်ကင်း ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း
၀ပ်ဆိုင်းမွန်း၊ မြန်မာကျောင်းတိုက်၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ စေတနာတတ်အားသမျှ စုပေါင်း၍ ပါဝင်လှူဒါန်း ကြပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ကိုသီဟန် ………… ၀၈၇၆၅၆၂၀၅၆
ကိုမင်းလွင်ဆွေ …… ၀၈၀၆၇၈၇၀၁၉
Posted in Activity, Announcement | Tags: Activity, Announcement
Myu Pa Pa Cho on CDCE seminar
buzznet.com on Scholarship Opportunities
Than Ei Nwe on CDCE seminar
ei mon oo on CDCE seminar
San Win Htun on CDCE seminar
Myanmar Rural & Agriculture
Phann Kharr Myay
Saydanar Funeral Aid Foundation